Isihogo singesamaKristu | isiZulu
Baphelelwe ubuntu abantu
Ngasho kudala ukuthi uhulumeni unamanga!
Nikhathazwa yini uma nibizwa ngamakhafula?
Durban - Uthi lo mfundisi oshumayelayo “uma niqhubeka nokudla isono sakulo mhlaba, sibekiwe isihogo ngomhla wokuphela lapho uyokusha emlilweni nguna phakade, kodwa uma wamukela uJesu njengomsindisi nomphelelisi wempilo yakho uyakuya ezulwini lapho kunenjabulo nendumiso enguna phakade”…
Sengiyazibuza-ke mina njengeNtshebe, kazi uyazizwa kahle ukuthi uthini lo mfundisi?
Asiqaleni la, uma amaKristu ecabanga ukuthi inkolo yawo esuselwe emfundisweni kaJesu yiyo kuphela esiholela eZulwini, asivumelane nanokuthi yiyo futhi esiholela esihogweni.
Loko ngikushiso ukuthi ezinye izinkolo zezizwe eziningi azinaso isihogo, isihogo sakhelwe amaKristu aphambukile ebuKristwini bawo hhayi abantu bonke abangesiwo amaKristu.
Kubiza ukuthi ngibe umKristu kuqala ukwamukela umbono weZulu nesihogo. Ngale kwaloko angihlangani nesihogo uma ngingesiyena umKristu.
Ngokwezibalo zezinkolo emhlabeni jikelele kweziyishumi ezilandelwa kakhulu ngokokulandelana kwazo eyobuKristu iyona ezihola phambili kuze eyobuSulumane kuze eyobuHindu kuze eyobu-Buddhism bese kugcina ebizwa ngeSikhism.
Zonke lezinkolo zinamandla kakhulu kanti noNkulunkulu zimchaza ngezindlela ezihlukile. NgokwamaKristu zonke lezinkolo ziya esihogweni ngoba aziyingeni ekaJesu…kwahleni bo!
Ukuze kube yingxenye yabantu abazoya esihogweni kumele ube ulikhethile ibandla ozolilandela elinesihogo ezimfundisweni zalo kungenjalo angeke uye esihogweni uma ungazihlanganisile nhlobo naso.
Isihogo esawo amaKristu aphambukile okholweni lwawo, mina njengoba ngingasonti ndawo angihlangene noJesu neZulu nasihogo. Kubiza ukuthi ube yikholwa, hhayi noma liphi nje kepha umKristu ukuze uye esihogweni noma eZulwini.
Nale yenguna phakade iyangidida mina kodwa ngiyazi bazothi ngenziwa yintshebe kanti cha-bo. Uma umvuzo wokukholwa enkolweni yobuKristu ukuyohlala nje kudunyiswe uJehova kuze kube phakade ngakolunye uhlangothi kunabantu abashayo esihogweni nguna-phakade…aykhona! Ngingalunga isonto lokuqala kusha indumiso, inyanga ngingayiqeda ngingasafuni lutho, unyaka ngingabe sengifile (kodwa kuthiwa akufiwa), iminyaka embalwa ngingacela ikhefu noma kengiyolunguza esihogweni ukuthi zikhiphani…hha! Ngethi kunzima amahora amabili nje enkonzweni yangesonto.
Lento yenguna phakade angiyizwa kahle ukuthi ichaza ukuthini yize iye itolikwe ngokuthi umshayushile ongenamkhawuko. Izulu nesihogo yizindawo ezisungulwe umuntu (human being) ngenkathi edidiyela inkolo. Ngikhule ngazi kakhulu inkolo yobuKristu nokuyiyo evama ukukhuluma lendaba yezulu nesihogo.
Uma ngikhula ngokomqondo ngiye ngabona ukuthi kukhona nezinye izinkolo ngaphandle kobuKristu.
Ungaxhumana noSibongiseni ku-sbmvula@gmail.com